Mpilalao mendrika 2018: atleta 213 notoloran’ny fitondrana fankasitrahana | NewsMada
Mpilalao mendrika 2018: atleta 213 notoloran’ny fitondrana fankasitrahana
Par Taratra sur 21/12/2018
Efa saika mamarana ny taom-pilalaovana 2018 avokoa ankehitriny, ny taranjam-panatanjahantena rehetra. Nisy araka ny fihetsika nasehon’ny fitondra-panjakana hankasitrahana ireo atleta mendrika tamin’ity taona ity, omaly, teny Iavoloha.
Atleta 213 mianadahy, avy amin’ny taranjam-panatanjahantena 12 dia ny handball, ny basikety, ny tenisy ambony latabatra, ny tenisy, ny atletisma, ny fibatana fonjam-by, ny tsipy kanetibe, ny kick-boxing, ny lomano, ny body building, ny rugby ary ny judo, nahavita be teo amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena, no notoloran’ny fitondrana fankasitrahana. Nampiarahana tamin’ny lanonana izany mba ho fanamarihana ihany koa ny fiafaran’ny taom-pilalaovana ho an’ny rehetra.
Tao ireo niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, ka nandrombaka medaly volafotsy, toy ny «tir de précision», sokajy lehilahy izay lasan’i Rakotoninosy Taratra. Ny ankamaroany kosa dia ireo nahazo ny tompondakan’i Afrika, na ho an’ireo sokajy «sénior», na ny zandriny. Anisan’izany ny tenisy, ny tenisy ambony latabatra, ny fibatana fonjamby, ny tsipy kanetibe, ny judo, ny lomano, ny baolina kitra, ny rugby, ny kick-boxing.
Nahazo lelavola, 1 tapitrisa Ar avy ireo niambozona medaly volamena, raha 500.000 Ar ny an’ireo nahazo volafotsy ary 200.000 Ar ny an’ireo niravaka alimo. Nahazo ny anjarany toy izany koa ireo mpanazatra.
Nambaran-dRakotovao Rivo, fa ilaina firaisan-tsaina ny fanaovana fanatanjahantena, izay tsy misy fahagagana ny vokatra azo fa miankina amin’ny ezaka atao. Tokony hahay hifehy tena hanaja ny mpifanandrina sy ny mpitsara ary hanaja ny fitsipika ny atleta, mba ho fitaratra eo amin’ny sehatra rehetra misy azy, fa tsy eny ambony kianja ihany. Ilaina, araka izany, ny fahazaka resy mba hampiezaka, handresena amin’ny manaraka.